Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Coronavirus Disease 2019 Covid19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက်လှူဒါန်းနိုင်ရေးကိစ္စ
Coronavirus Disease 2019 Covid19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက်လှူဒါန်းနိုင်ရေးကိစ္စ
EMBASSY OF THE REPUBILC OF THE UNION OF MYANMAR
၁။ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ (Pandemic)အဖြစ် ထုတ်ပြန်ထားသောCoronavirus Disease 2019 COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊
ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ ကုမ္ပဏီများ၊ အသင်းအဖွွဲ့များနှင့်
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် တတ်အားသရွှေ့ အလှူငွေများပါဝင်လှူဒါန်းလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ ဘဏ်များတွင် ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသဖြင့်
အဆိုပါဘဏ်များ၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားဖော်ပြအပ် ပါသည်-
Bank Name - Myanmar Economic Bank (H.O), Forex Operation
Account No. - CF 004880 (MMK)
- EDN 600010 (US$)
Swift Code - MYEBMMMY
Account Name - National Level Central Committee for
Prevention Containment and Treatment of Covid 19
Bank Address - Myanmar Economic Bank (H.O), Loan &amp;
Supervision Dept., No.(26) Thiri Kyaw
Swa Road, Bank Zone, Naypyitaw Myanmar
Bank Name - KBZ Bank Ltd.
Account No. - 034 103 034 0232 8301 (MMK)
- 034 109 034 0232 8301(US$)
Swift Code - KBZBMMMY
Account Name - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
( National Level Central Committee For Preventing and Containing the Virus)
Bank Address - No.53,6Story Office Building, Corner of
Merchant Road &amp; Bosonpat Street,
Pabedan Township , Yangon, Myanmar
Branch Address - No.1,Bank Ward,Oakataya Thiri Township Naypyitaw
Account No. - 000 110 501 002 5635 (MMK)
- 000 110 503 000 0425 (US$)
Swift Code - AYABMMMY
Account Name - CORONAVIRUS DIEASE 2019 (COVID-19)
NATIONAL CENTERS FOR DISEASECONTROL AND PREVENTION COMMITE
Bank Address - No. 416/ Mahabandoola Road,
Branch Address - N0.(110-112), Thiri Yadanar Shopping
Complex, Datkhina Thiri Township, Naypyitaw
(ဃ) CB ဘဏ်
Account No. - 0093 1005 0000 1333 (MMK)
- 0093 1012 0000 2957 (US$)
Swift Code - CPOBMMMY
Account Name - CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DONATION